Maxay yihiin isolines - noocyo iyo dalabyo - Geofumadas
Disember, 2019 ArcGIS-ESRI, Baridda CAD / GIS
Khadka toosan waa xariiq ku biireysa ujeedooyinka qiime u dhigma. Naqshadeynta sawir-qaadista, isolines waxay isu yimaadaan si ay u muujiyaan heersare u dhigma heer ka sarreeya, sida celceliska heerka badda. Khariidadda qaanso-goobeedku waa hage si loo metelo muuqaallada sare ee juquraafi ahaanta dhul iyadoo la adeegsanayo xariiqyo. Waxaa loo istcimaalaa si joogto ah si loo muujiyo dhererka, u janjeedha iyo qolalka dooxooyinka iyo buuraha dhaadheer. Booska u dhexeeya laba laamood ee gadaal gadaal gadaal u ah khariidad waxaa loo yaqaannaa qaab dhexdhexaad ah waxayna muujineysaa kala soocidda kore.
ArcGIS waxaad ku baran kartaa sida loo isticmaalo isoline-ka sifiican, sidaa darteed khariidadu waxay ugula xiriiri kartaa sedex geesoodka dhulkasta oo khariidad laba dhinac leh. Adoo qeexaya khariidadda isolines ama contours, macmiilku wuu tarjumi karaa jarka dusha sare. Haddii ay tahay mid qoto dheer ama sare u eg aag, juqraafi ahaan waxay ka hadli karaan juqraafi ahaan aagga. Booska u dhexeeya laba isugeyn oo khadka ku dhex jira ayaa macaamiisha siinaya xog muhiim ah.
Khadadka waxay noqon karaan qaloocsan, toosan ama isku-dar ah labadaba oo aan ka gudubin midba midka kale. Tixraaca dhererka ay muujiyeen isolines, guud ahaan waa celceliska dhererka badda. Booska taxanaha ah ee u dhexeeya isolines-ka ayaa muujinaya jihada dusha sare ee daraasadda waxaana loo yaqaan "ku-meel-gaar". Haddii ay dhacdo in israa'illada si adag loogu kala firdhiyo, waxay muujin doonaan ujeedo aan caadi ahayn. Dhanka kale, hadii isolines-ka la tuso meel fog, waxaa jira hadal jilicsan oo jilicsan. Qulqulka, biyo-mareennada dooxada dhexdeeda waxaa lagu muujiyaa "v" ama "u" khariidadda geesoodka.
Koofiyadaha waxaa badanaa la siiyaa magacyo horgala ah "iso" oo macnaheedu yahay "u dhigma" af Giriig, marka loo eego nooca doorsoomaha ee la soo saaray. Horgalaha «iso» waxaa lagu buuxin karaa «isallo» kaas oo go’aaminaya in xariiqa qaabku uu ku biiro halka isbeddelada is beddelka ay ka dhacaan xawaare isku mid ah wakhti go'an. In kasta oo xaqiiqda ah in erayga qalooca guud ahaan loo isticmaalo, magacyo kale ayaa si isdaba joog ah loogu isticmaalaa saadaasha hawada, halkaas oo ay u badan tahay suurtogalnimada isticmaalka khariidadaha topograafiga leh arrimo dhowr ah waqti kasta. Sidoo kale, meelaha si siman loo kala sooci karo iyo isbadalku waxay muujinayaan dareen isku wada mid ah.
Adeegsiga khadadka isku xira qodobbada qiimaha u dhigma, waxay jireen muddo dheer in kasta oo ay isku yaqaaneen magacyo kala duwan. Isticmaalkii ugu horeeyey ee duuban ee khadadka dusha ayaa loo sameeyay si loo muujiyo qoto-dheerida marin-biyoodka Spaarne oo u dhow Haarlem nin reer Dutch ah oo la yiraahdo Pieter Bruinsz sanadkii 1584. Isolines oo macnaheedu yahay qoto dheer joogto ah ayaa hadda loo yaqaan "isobats." Intii lagu jiray sannadihii 1700, khadadka jaantusyada iyo khariidadaha ayaa loo isticmaalay in lagu qeexo qoto dheerida iyo cabbirrada jirka ee biyaha iyo aagagaba. Edmond Halley ee 1701 wuxuu adeegsaday khadadka qulqulaha 'isogonic contour' oo leh noocyo kaladuwan oo soo jiidasho leh. Nicholas Cruquius wuxuu isticmaalay isobatas dhexdhexaad ah oo u dhiganta 1 fathom si loo fahmo oo loo sawiro sariirta biyaha ee 'Merwede waterway' sanadka 1727, halka Philippe Buache uu adeegsaday dhexdhexaadin xamaasad xNUMX ah oo loogu talagalay Channelka Ingiriisiga ee sanadka 10. 1737 Domenico Vandelli wuxuu adeegsaday contours si uu u qeexo dusha sare, isagoo sawiraya tusaha Duchy ee Modena iyo Reggio. 1746 wuxuu ku hogaamiyay tijaabada 'Schiehallion' si loo qiyaaso celceliska dhumucda Dunida. Fikradda ah isolines waxaa loo isticmaalay in lagu baaro geedaha buuraha inay caddeyn u yihiin. Laga soo bilaabo halkaas, isticmaalka isolines ee khariidaynta ayaa noqotay istaraatiijiyad guud. Istaraatiijiyaddan ayaa loo adeegsaday 1774 by JL Dupain-Treil oo loogu talagalay hage ka timid Faransiiska isla markaana 1791 Haxo u adeegsaday shirkadahooda Rocca d'Aufo. Laga soo bilaabo wakhtigaas wixii ka dambeeyay, waxaa si guud loo istcimaalay istaraatiijiyada khariidaynta iyo codsiyada kala duwan.
1889 Francis Galton wuxuu soo jeediyay erayga "gooni goosadnimo" asal ahaan aragtida xariiqda muujinaya isku xirnaanta ama isbarbardhiga mawduucyada ama muujinta tiro ahaan. Erayada "isogon", "isoline" iyo "isarithm" ayaa guud ahaan loo isticmaalaa inay matalaan isolines. Ereyga "isoclins" waxaa loola jeedaa xariiq fiiro gaar ah leh oo leh isjecel u dhigma.
Noocyada iyo codsiyada isolines
Isolines waxaa si ballaaran loogu isticmaalay khariidadaha iyo metelaadda macluumaadka jaantus iyo cabbiridda. Khadadka qashinka ayaa loo sawiri karaa qaab ahaan ama muuqaal muuqaal ah. Muuqaalka fidsan waa metelaada hagida, si markaa daawadahu u arki karo korkiisa. Muuqaalka guud ee muuqaalka ayaa si joogto ah u ah xudud loo habeeyay si toos ah. Tusaale ahaan, aagagga aagga waxaa loo qaabayn karaa qaab ama qaab hawleed, halka wasakhowga hawada ee gobolka loo arki karo aragti guud.
Haddii aad ka heshid jaranjaro aad u qotodheer oo hagaha ah, waxaad arki doontaa in isolines-ku ay ku jiraan qaab dhismeedka qaababka "gaadiidleyda". Xaaladdaan, xariiqa ugu dambeysa ee qulqulaya mararka qaarkood waxay leeyihiin calaamado qalin jabinta oo muujinaya dhul hoose. Roobabku waxaa kale oo lagu muujiyaa iswaafajin ku saabsan midba midka kale isla markaana, kiis kasta, ma la xiriirayaa midba midka kale ama si adag ayaa loo hagaajiyaa.
Khadadka qiimahoodu waxaa loo isticmaalaa meelo kala duwan, si loo muujiyo macluumaad fara badan oo ku saabsan goobta. Sikastaba, ereyada loo isticmaalay magaca 'isolines' waa la beddeli karaa nooca macluumaadka ee lagula hadlo.
Cilmiga Bey'ada: Isopleths waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo khadad muujinaya doorsooma aan lagu qiyaasi karin hal dhibic, hase yeeshe, waa qayb hoose oo macluumaad ah oo lagu soo uruuriyo aag ballaaran, tusaale ahaan, dhumucda dadweynaha.
Isku soo wada duuboo, deegaanka Isoflor, isoplette waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro degmooyinka leh noocyo dabiici ah oo isbarbar dhiga, kuwaas oo soo bandhigaya tusaalooyinka gaadiidka iyo qaababka noocyada xoolaha.
Sayniska Deegaanka: Waxaa jira adeegsiyo kaladuwan oo loo yaqaan 'isolines "ee cilmiga deegaanka. Khariidadaha dhumuc ahaan wasakhaysan ayaa qiimo u leh muujinta aagagga leh heerar sare iyo hoose ee wasakhda, heerar u oggolaanaya suurtagalnimada in wasakhda ay ka sii dari karto gobolka.
Astaamaha loo yaqaan 'Isoplates' waxaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo roobab wasakh ah, halka go'dolas loo isticmaalo in lagu muujiyo heerarka sunta wasakhda aagga.
Fikradda ah khadadka dusha ayaa loo adeegsaday abuurista iyo furfurida qaababka, taas oo la ogyahay inay hoos u dhigayso kala daadinta carrada illaa heer aan caadi ahayn oo ku yaal dhulalka, dariiqyada marinnada biyo mareennada ama qaybaha kale biyo
Cilmiga bulshada: Khadadka dusha ayaa si isdaba joog ah loogu isticmaalaa cilmiga bulshada, si loo muujiyo noocyo ama loo muujiyo baaritaan qaraabo ah oo ku saabsan doorsoomaha dhul gaar ah. Magaca xariiqda foomka ayaa isbeddeleysa nooca xogta ee ay ku shaqeyso. Tusaale ahaan, xagga dhaqaalaha, isolines-ka waxaa loo isticmaalaa in lagu matalo muuqaallo sare oo wax ka beddeli kara dhul, oo la mid ah isodapane oo ka hadlaya qiimaha dhaqdhaqaaqa waqtiga, isotim waxaa loola jeedaa qiimaha gaadiidka laga soo qaado isha sheyga ceeriin ah, ie. Wadahadal aan kala go 'lahayn oo ku saabsan kordhinta qarniga faafitaanka macluumaadka xulashada
Tirakoobka: Imtixaannada la cabiro, isolines-ka waxaa loo isticmaalaa in lagu helo dariiqooyinka oo ay la socdaan qiyaasta dhumucda itimaalka, oo loo yaqaanno khadadka isodensity ama isodensanes.
Saadaasha Hawada: Isolines waxay si weyn u adeegsadaan saadaasha hawada. Macluumaadka laga helo xarumaha cimilada iyo satalaytka cimilada, waxay gacan ka geysaneysaa sameynta khariidadaha isugeynta meteorological, oo tilmaamaya xaaladaha cimilada sida roobka, xoog neefsashada inta lagu jiro muddo. Waxyaabaha kala duwan ee loo yaqaan 'isotherms' iyo 'isobars' waxaa loo isticmaalaa dhowr qaybood oo dabool ah si loo muujiyo qaybo kala duwan oo heerkul ah oo saameeya xaaladaha cimilada.
Daraasadda heerkulka: Waa nooc ka mid ah isoline-ka oo isku xirka dhibcaha la leh heerkulka u dhigma, ee loo yaqaan go'yaasha iyo dhulalka isku xidha shucaaca qorraxda u dhigma ayaa loo yaqaan isohel. Isolines, oo u dhiganta celceliska heerkulka sanadlaha ah waxaa loo yaqaan 'isogeotherms' iyo gobollada la xiriira celcelis ahaan heerkulka xilliga qaboobaha ama u dhigma ayaa loo yaqaan isochemicals, halka celceliska heerkulka xagaaga ee xagaaga loo yaqaanno waa meesha.
Daraasadda dabaysha: Sahaminta meteorology, xariijinta korantada ee ku xira xawaaraha xawaaraha dabaysha joogtada ah waxaa loo yaqaan 'isotach. Xadhig gooniya ayaa muujinaya dabayl joogto ah
Roob iyo qoyaan: Erayo dhowr ah ayaa loo isticmaalay in lagu magacaabo magacyada loo yaqaan 'isolines' oo muujinaya dhibco ama aagag ay ku jiraan roobab iyo wax dhoobo leh.
Isoyet ama Isoyeta: Muuji roobka deegaanka
Isochalaz: waa khadad muujinaya dhulal leh soo noqnoqda roobab baraf leh.
Isobront: Iyagu waa tilmaamyo muujinaya aagaggii ku guulaystay ficilkii duufaanta isku waqti.
Isoneph tus daruur fidsan
Isohume: waa xariiqyo mideeya dhulalka iyadoo la jaan qaadaya xiriir joogto ah
Isodrostherm: Wuxuu muujiyaa meelaha ay ku sugan tahay dhibicda dejinta ama kordhinta
Isopectic: waxay muujisaa meelaha leh taariikhaha qaybinta barafka lagu kala saari karo, halka isotac-ku loola jeedaa taariikhaha wax lagu dhimayo.
Cadaadiska dhiiga ee korometric: Cilmiga hawada, cilmi-baarista cadaadiska hawada ayaa lama huraan u ah in la saadaaliyo naqshadaha cimilada ee mustaqbalka. Miisaanka barometric wuxuu hoos ugu dhacaa heerka badda marka lagu muujiyo xariiq. Aagagga waa goyn mideeysa degmooyinka culeyskiisu cimilo joogto ah leeyahay. Isoallobars waa hagitaan leh miisaanka oo isbeddelaya waqti cayiman. Kelladaha loo yaqaan 'isoallobars', ayaa sidaas darteed, lagu go'doomin karaa ketoallobars iyo falanqeeyeyaasha, oo tilmaamaya hoos u dhaca kordha ee miisaanka oo isbeddelaya
Heerkulbeega iyo injineerinka: In kasta oo goobahan isku uruurinta mararka qaarkood ay ku jiraan xariijinta hagida, waxay ogaadaan isticmaalkooda muuqaalka muuqaalka leh ee sawirka iyo sawirada masraxa, qeyb ka mid ah noocyada caadiga ah ee loo yaqaan 'isolines' ee caadiga ah ee loo adeegsado meelahan daraasadaha lagu kala leeyahay:
Isochor waxay u taagan tahay qiimaha mugga joogtada ah
Isoclines waxaa loo isticmaalaa xaalado kaladuwan
Isodose waxaa loola jeedaa haynta qayb u dhiganta shucaaca
Isophote waa iftiin joogto ah
Magnetism: Khadadka dusha ayaa si cajiib ah waxtar ugu leh dib-u-eegidda duurka soo jiidashada leh ee dhulka. Caawinta cilmi baarista soo jiidashada iyo hoos u dhaca magnetic.
Khadadka Isogonic ama isogonic contour waxay muujinayaan xariiqyo hoos u dhac soo jiidasho leh. Xariiqda muujineysa hoos u dhigista eber waxaa loo yaqaanaa khadka 'Agonic line'. Isoline isu keena mid kasta oo ka mid ah qaababkan, oo ay weheliso awood joogto ah oo soo jiidasho leh ayaa loo yaqaan khadka isodynamic. Khadka 'isoclinic Line' wuxuu isu keenayaa dhammaan qaabaynnada gobolka oo leh quusin soo-jiidasho leh oo u dhiganta, halka khadka xaruntu ay isu keento dhammaan aagagga leh miro dhalinta soo jiidashada eber. Xariiq go'doon ah waxay heshaa mid kasta oo ka mid ah dariiqyada oo ay weheliso sanad kasta joogtada ah ee kala duwanaanshaha soo jiidashada leh.
Daraasaadka joqoraafi ahaaneed: Sida ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'isolines' - contours, waxaa loogu talagalay matalaadda sare iyo qoto-dheer ee gobol. Khadadkan waxaa loo isticmaalaa khariidadaha topografi to si muuqaal ahaan u muujiyaan dhererka, iyo sawirka qubayska si loo muujiyo qoto dheer. Qariiraddan taariikhiga ah ama taariikheed ee qubayska ayaa loo isticmaali karaa in lagu muujiyo gobol yar ama gobolo sida dhul ballaaran. Booska taxanaha ah ee u dhexeeya khadadka dusha, oo loo yaqaanno dhex-dhexaad ayaa tilmaamaysa kororka ama qotada dheer ee u dhexeeya labada.
Markaad ka hadlaysid dhul leh xariiq toosan, Khadadka u dhawaa waxay muujinayaan soo jiidasho sare ama xagal, halka jihooyinka fog ay ka hadlaan soojiidashada qotoda dheer. Wareegyada xiran waxay muujineysaa xoog, halka banaanka ay muujineyso hoose. Goobaabka ugu hooseeya ee khariidadda dusha ayaa muujinaya in aaggaasi yeelan karo niyad jab ama qulqulo, bartaas loo yaqaan "hachures" ayaa laga dhex muujiyey goobada dhexdeeda.
Juqraafiga iyo Oceanography: Khariidadaha kontaroolada waxaa loo isticmaalaa baaritaanka ofpografiation ofisiga, dhinacyada jirka iyo dhaqaalaha ee lagu muujiyey dusha adduunka. Isopach waa khadadka shaashadda oo hela fociyo leh dhumuc u dhigma oo unugyo juqraafi ah.
Intaa waxaa sii dheer, buugga casriga ah ee loo yaqaan "oceanography", dusha qulqulaya ee biyuhu waxay u dhigmaan yihiin khadadka qaanso ee loo yaqaan 'isopicnas', iyo 'isohalins' waxay isku xiraan dhibco la mid ah badeecadaha biyaha badda ee u dhigma. Cudurka loo yaqaan 'Isobathytherms' wuxuu diiradda saaraa heer kulka u dhiganta badda.
Qalabka korantada: Qalabka korantada leh ee hawada sare lagu muujiyo waxaa badanaa lagu muujiyaa khariiddada khaas ah. Qalooca ku soo biirida dhibcaha leh awood koronto oo joogto ah waxaa loo yaqaannaa xariiq go'an ama qalab go'an.
Astaamaha khadadka dusha qariidadaha ee khariidadaha dusha kala baxa
Khariidadaha dusha laga soo qaado ma ahan oo keliya matalaad koodh, ama hagitaan jaranjarada ama qoto dheer dhulalka, laakiin iftiiminta sare ee isoline-ka ayaa u oggolaanaya faham aad u cajiib ah oo ku saabsan muuqaalka muuqaalka dhulka. Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah tilmaammada sare ee badanaa lagu isticmaalo khariidaynta:
Nooca khadka: Waa la dhibic karaa, xoogaa ama waa la ordi karaa. Sadarka dhibicda ama xariiqda orodka waxaa badanaa la adeegsadaa marka ay jirto macluumaad ku saabsan dusha qolka laga arki karo xariijin xoog leh.
Dhumuc xariiq: Waxay kuxirantahay sida xariijinta ama qotanta xariiqda loo sawiray. Khariidadaha kontaroolada ayaa inta badan lagu sawiraa xariiqyo dhumucdoodu kaladuwan tahay si ay u muujiyaan tayo tiro kala duwan ama noocyo kala duwan meelaha sare ee dhulka.
Midabka safka: Noocan ah xarkaha shaandhada qulqulaya ayaa isku beddalaya hage si loogu aqoonsado dusha salka. Xiirashada xariiqda ayaa sidoo kale loo isticmaalaa inay ku badasho tayada tirooyinka.
Shaabadaynta tirooyinka: Waa muhiim dhamaan khariidadaha dusha laga wadaago. Badanaa waxaa lagu sameeyaa meel u dhow khadka dusha ama waxaa laga yaabaa inuu ka muuqdo dusha hagaha. Qiimaha nambarku wuxuu caawiyaa in la kala saaro nooca isugeynta.
Aaladda Khariidadaha Topographic
Khariidadaha waraaqaha caadiga ah maahan habka kaliya ee loo adeegsado khariidadaha istimber ama kontoroolada. In kasta oo ay xaqiiqda tahay in ay muhiim yihiin, oo ay la socdaan horumarka hal-abuurka, khariidadaha hadda waxay ku jiraan qaab dhismeed aad u horumarsan. Waxaa jira dhowr qalab, dalabyo isku mid ah iyo barnaamij loo heli karo si looga caawiyo tan. Khariidadahaani waxay noqon doonaan kuwo sii kordha oo sax ah, dhaqso badan oo la sameeyo, waxna lagu beddeli karo si wax ku ool ah waxaad sidoo kale u diri kartaa jaalayaashaada iyo asxaabtaada! Marka xigta, tixraac ayaa loo sameeyaa qayb ka mid ah aaladahaas oo leh sharraxaad kooban
Qariiradaha Google waa badbaadiyayaal adduunka oo dhan ah. Waxaa loo istcimaalay sahaminta magaalada, iyo ujeedooyin kale oo kala duwan. Waxay leedahay "aragtiyo" dhowr ah oo la heli karo, tusaale ahaan: taraafikada, dayax gacmeedyada, muuqaalka sawirka, wadada, iwm. Adoo ka shaqeynaya lakabka «Sawirka Beeraha» ee laga helo xulashada xulashooyinka ayaa ku siin doona aragtida topografi ahaan (oo leh khadadka dusha).
Gaia, ArcGIS, Qalabka dambe ee loo yaqaan 'Backcountry Navigator' (Codsiyada Tiroorsan)
Sida codsiyada kale ee badan ee la qaadan karo ee labadaba Android iyo macruufka, macaamiisha iPhone waxay isticmaali karaan Gaia GPS. Waxay u siisaa macaamiisha khariidadaha topografiyo leh oo ay la socdaan noocyo kala duwan. Codsiyadaan waxay noqon karaan bilaash ama waa la bixin karaa iyadoo ku xiran adeegsiga lagu dhawaaqay. Codsiyada dariiqa looma isticmaalo oo keliya in lagu helo xogta topographic, laakiin sidoo kale waa kuwo aad waxtar u leh. ArcGIS araajida iyo codsiyada kala duwan ee ESRI waxaa loo isticmaali karaa oo keliya ujeeddooyinka khariidaynta.
Kama ciyaari kartid dhamaan awoodaha taleefannada mobilada, waana halkaan meelaha ay ka shaqeeyaan iyo kumbuyuutarrada PCP-ga ay yihiin geesiyaal. Waxaa jira marxalado khadka tooska ah iyo barnaamijyo la rakibi karo oo kaa caawin kara inaad dhammeysato hawshaada xigta. Captopo waa aalad hagitaan barnaamij-ku-saleysan oo kuu oggolaaneysa inaad daabacdo khariidadaha qaab-dhismeedka gaar ahaaneed. Intaa waxaa sii dheer, waxay kuu oggolaaneysaa inaad u dirto / u wareejiso aaladda GPS-kaaga ama taleefannada gacanta. Intaa waxaa sii dheer, waxay taageertaa is-beddelidda ama khariidadaha waxayna u gudbisaa macaamiisha kaladuwan.
Waxaa loo arki karaa inuu yahay bixiye taageero. Waxay u egtahay sida Caltopo (kor lagu soo sheegay), si kastaba ha noqotee, waxay diiradda saareysaa Kanada iyo Mareykanka (runti waxaan aaminsanahay inay sidoo kale ku wareegi doonaan quruumo kala duwan!). Waxay bixiyaan khariidado khariidadaysan oo faahfaahsan, oo ay ku jiraan khariidadaha topograafiga ah, sawirrada dayax-gacmeedka iyo khariidadaha dabaqa furan ee degmo kasta oo Mareykanka ah. UU. Khariidado aad u tayo sareysa, oo aad ku arki karto qadka bilaashka ah ama u soo dir sida dareenka heerka koowaad qiimaha yar.
Waad iska qori kartaa Tababbarka ArcGIS Ku noolaanshaha Edunbox oo leh taageerada 24 / 7 iyo marinka nolosha.
Maqaalka waa iskaashi TwinGEO, oo uu samaynayo saaxiibkeen Amit Sancheti, kaasoo u shaqeeya sida madaxa fulinta ee SEO Edunbox oo halkaasuu ku maamulaa dhammaan shaqooyinka la xiriira SEO iyo qoritaanka nuxurka.
Post Previous«Previous FES waxay ka bilowday Indiyaarka Indiyaanka ee GeoSmart India
Post Next FARO waxay ku soo bandhigi doontaa tikniyoolajiyadeeda 3D ee himiladeed ee geospatial iyo dhismaha Shirka 2020 World Geospatial ForumNext »